China Aluminium Alloy Toolbox vagadziri uye vanotengesa | YSXF
Yedu MaxxHaul Trailer Tongue Bhokisi rakagadzirirwa kumisikidza kumatrailer ane A-Rimi furemu kuti ipe yakawedzera kuchengetedza maturusi ako, musasa magiya, chengetedzo ngetani, tambo, mabutiro emotokari, zvekunze zvekunze, tambo, hitch accessories, tambo, vhiri choki uye nezvimwe zvakawanda. . Usambofa wakakanganwa chishandiso kana giya paunenge uchizvida!
- Yakagadzirwa kubva mukugara kwenguva refu uye ngura-inodzivirira mwenje-mu-huremu aluminium zvinhu ine yakazara welded musono kuvaka uye kuomarara upfu jasi kupera
- Dhaimani dhizaini pateni inopa yakawedzera simba uye rubatsiro inochengetedza chimiro chayo chekuwedzera kusimba
- Inoratidzira tambo yegasi kubatsira pakuvhura muvharo, bata chivharo panzvimbo uye kuvhara zvakapfava.
- Bhokisi rinoyera 29 "kureba x 18" kureba uye 17 "yakafara ne15" kumberi kureba.
- Kuvhara muvharo nemakiyi maviri uye yakagadzika latse yakagadziriswa. Yakatsigirwa yakakosheswa yakaiswa kuitira kuti muvharo ugone kuvhurwa zvizere kunyangwe kana yakakwenenzverwa yakanangana neturera
● Yepamusoro-simba, ngura-inodzivirira aruminiyamu bhokisi rekushandisa
Yakakwirira-mhando uye yakasimba dhivha, kushoma kugadzirisa
Lightweight aluminium zvinhu zvinoderedza huremu kuwana pamatarakita, mataera, kana marori.
● Seal mhete dhizaini
Inogona kuchengetedza kuchena kwemukati uye kudzivirira kupinda kwemvura nezvimwe zvinhu zvekunze.
● Inogona kugadzirwa nemhando dzakasiyana, mavara uye zvitaera
Yakachena uye inopenya aruminiyamu ruvara, chero saizi inogona kuve yakasarudzika, uye yepamusoro kurapwa, yakagadzirwa mumarudzi akasiyana siyana senge nhema, grey, sirivheri uye chena.
Inogona kugadzirwa mumhando dzakasiyana zvinoenderana nezvinodiwa kusangana nezvimwe zvakasiyana zvinodiwa.
Pashure: Turck Bhokisi Rekushandisa
Zvadaro: Pickup Toolbox
MUDZIMAI WEMAHARA WEZVINONYANYA KUKWEDZA NOKUTAKURA - Iri bhokisi rematurusi rakagadzirwa neyakaomarara asi isina huremu hwekuvaka kukwira kumberi kweA-Freyera mataera mataera. Nyore kuungana, yakanaka kutakura kubva kune imwe nzvimbo kuenda kune imwe kana zvichidikanwa. Mhinduro huru yekuchengetera maturusi ako kana zvinhu mugaraji rako uye inowedzera imwe nzvimbo yekuchengetera kune yako yakavharika tirera. ✅ DURABLE DIAMOND RUGGED DESIGN - Yakagadzirwa ine rugged aluminium ine yakazara welded seams, yekushandisa zvisina kunaka. Chishandiso chekuchengetedza ...
Kutora / bhokisi rematiraki Isimbi simbi tabhara rakakomberedza Rubhu mamiriro ekunze kusimbisa guruva nemvura Chivharo / chepamusoro chinogona kutora yakawedzera 1 1/4 inch munzvimbo yakavhurika, zvinoenderana nekuisirwa 1.5 mm aluminium yekutsika ndiro yekuvaka Chigadzirwa sumo: Iyo aluminium alloy toolbox ndeye yakagadzirwa nemhando dzakasiyana dzealuminium alloy zvinhu, izvo zvine zvakanakira chitarisiko chakanaka, kurema uremu uye yakasimba mutoro-kutakura. Sezvo zvemukati zvemukati zvealuminium ...